I-Internet Ministries - Amasonto eqembu likaKhristu lokuHlola iNhlekelele
Ithimba Lokuphendula Ngezinhlekelele litholakala ngokushesha emaqenjini angakini endaweni ehlaselwe yinhlekelele. Injongo yeThimba lempendulo yezinhlekelele ukusiza ibandla langakini ekuqasheni nasekutholeni amavolontiya ukusiza ngezidingo ezingokomzwelo nezingokomoya zalabo abahlukunyezwe yizinhlekelele kanye nokuzisiza esimweni sokuhlanza nokuvuselela.
Ithimba Lokuphendula Ngezinhlekelele lizoletha lokhu okulandelayo enkundleni ukuze kusize ibandla lasekhaya ukuze lifinyelele emphakathini wabo:
I-Mobile Shower Trailer
I-trailers yamathuluzi ngokuphelele
Ithimba Lokuphendula Ngezinhlekelele lithenga ukudla okuhlinzekwa kuyo yonke imiphakathi ezindaweni ezizinhlekelele kanye nezinto zokwakha, izimpahla zasendlini, amathuluzi, ukukhishwa kwemfucumfucu, njll Kwalabo abangenawo / abangaphansi kwe-insured.
YINI IMISEBENZI YOKUPHUMA IMPENDULO YEMPENDULO
Abaqeqeshi be-Volunteer 1st abaqeqeshwe ukuqeqeshwa ukulethwa ukusiza ibandla lakho lenze umzamo wokusiza owenziwe ngokusabalalisa, ukuhlanza nokuvuselela izigaba
I-30 'Yomkhakha Wasekhishini Yezohwebo Zezentengiselwano ezenzelwe ukusiza ukudla kwe-3,000-4,000 / usuku emphakathini nasezisebenzi zokuzithandela
I-1st Impendulo ye-Semi Tool Trailer kanye namathrekhi amaningana atholakala ngamathuluzi amasha, ama-saws, amafosholo, izintambo, izintambo, ngokuyisisekelo noma yiliphi ithuluzi elizodinga izisebenzi zokuzithandela
Ama-RV angeniswa ukusiza izisebenzi zokuzithandela zendlu
I-trailer ye-Shower yokusebenzisa ngokuzithandela
Idatha yezinkulungwane zamavolontiya abhalisele i-DRT ebizwa ukuthi iyasebenza
Ithimba Lokuphendula Ngezinhlekelele kusiza ukuthenga ukudla kanye nokwakha impahla
I-836 S. Brown School Road
Siyojabula ukunikeza noma yiluphi olunye ulwazi olungase ludinge. Sitholakale ukuza ebandleni lakho ngenkulumo yokusiza okudlule. Sicela ushayele i-Team Response Team ukuhlela isethulo.
Uma ufisa olunye ulwazi sicela uxhumane noSteve Liles ku-937-689-5725 noma u-Karen Kofahl ku-214-734-9647.